Who were Bengali, so called Rohingya?: ခွေးစိတ်ဝင်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီကုလားများနှင့် အပေါင်းအပါများ
ခွေးစိတ်ဝင်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီကုလားများနှင့် အပေါင်းအပါများ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရဲ့ စစ်တကောင်း တောင်တန်းပေါ်မှာ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေဟာ ဒေသခံ သက်၊ မရမာ စတဲ့ လူမျိုးတွေရဲ့ အိမ်တွေ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို လုယူခဲ့ကြတယ်။ အခုထိလည်း လုယူနေတုန်းပဲ။ မရရင် မီးရှို့ပြီးတော့ ပြည်သူတွေ မနေနိုင်အောင် လုပ်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ကပဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့အိမ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကို မီးရှို့လို့ ဒေသခံတွေ ခွေးပြေးဝက်ပြေး ပြေးကြရတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ဒီမိုကရေစီ ရနေပေမဲ့ စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ်ကို ဘင်္ဂလီစစ်တပ်အောက်မှာ ထားပြီး တိုင်းဦးသားဒေသခံတွေကို မနေနိုင်အောင် လုပ်ပြီး ခြံမြေတွေကို လုနေကြတယ်။ မကြာခင် လပိုင်းတုန်းကပဲ အင်တာနတ်ပေါ်မှာ ဘင်္ဂလီတစ်ဦးက မိသားစု သုံးဦးကို သတ်ပြစ်တဲ့ ကြောက်လန့်ဖွယ် ပုံတွေကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒေသခံအမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကို အဲဒီဘင်္ဂလီက မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ကောင်မလေးက အော်တော့ ကောင်မလေးရော၊ သူ့ကို ကူညီဖို့ ပြေးလာကြတဲ့ အဖေနဲ့ ဆွေမျိုးတစ်ဦးကိုပါ သတ်ပစ်တယ်။
”ရိုဟင်ဂျာ”သုံးရင် အခွင့်အရေးပိုရမယ်ဆိုတာသိတော့ အလွဲသုံးစားလုပ်ကြတယ်။ ဟိုကဒီက ကုလားတွေကပါ ၀င်ပြီး ရိုဟင်ညာ ကြတယ်။ သမိုင်းတွေကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ကလိကြတယ်။ ပုံကားချဲ့ကြတယ်။ ကျနော်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က အမေရိကန်တရားရေး ဌာနအောက်မှာ ရှိတဲ့ လ၀က တရားရုံးမှာ ရခိုင်နဲ့ ဗမာ ဘာသာပြန်လုပ်ပါတယ်။ ”ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုတဲ့ နာမည်ကို သုံးပြီး အမေရိကမှာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် လျှောက်တဲ့ လူတွေကို အများကြီးတွေ့လာတယ်လို့ ဆိုတယ်။ သူတို့က မြန်မာပြည်ကပါလို့ ပြောပြီး စကားပြန်ရှေ့မှာ ဗမာစကားရော၊ ရခိုင်စကားပါ မပြောတတ်ကြဘူးတဲ့။ အဲဒါနဲ့ အမှုစစ်လို့ကို အဆင်မပြေဘူးတဲ့။ ကောင်းလေရော...
အခုတော့ ရခိုင်လူမျိုးတွေဆီက ခိုးသွားတဲ့ ”ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက အချိန်ကြာလာတော့ သူခိုးလက်ထဲရှိရာကနေ ပိုင်ရှင်လက်ထဲရောက်သွားသလို ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဘာများ သူတို့ လက်ထဲရောက်အုံးမလဲ ဆိုတာကတော့ မသိသေးပါဘူး။ ပြည်ပအတိုက်အခံ မီဒီယာတွေကတော့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ မသင့်မြတ်တဲ့လူဆိုရင် ပြီးရော၊ ရိုဟင်ညာနဲ့ အတူ ညာလျှက်ပဲ ရှိနေကြောင်းပါ ခင်ဗျာ...
စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ်က ရခိုင်မျိုးနွယ်စုနဲ့ တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အိမ်များ မီးရှို့ခံရစဉ်။
စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ်က ရခိုင်မျိုးနွယ်စုနဲ့ တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဘာသာရေးအဆောက်အဦးများ မီးရှို့ခံရစဉ်။
Credit: Kyaw H. Aung Facebook
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 11:43 AM
Labels: ဓာတ်ပုံ, သတင်း, သမိုင်းဆိုင်ရာ, ဆောင်းပါး
ရခိုင်အမျိုးသားတွေ အားမလျှော့ပါနဲ့...ဘီဘီစီက လက်တစ်ဆုပ်စာပါ။ ရခိုင်အမျိုးသားတွေအနောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ တွေ ရှိပါတယ်။ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ရှိပါတယ်။ ဘယ်လူကြီးတွေ မစည်းရုံးလည်း ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေစည်းရုံးပါမယ်။ မြန်မာမြေပုံဆိုတာ ရှိနေသရွေ့ ဘယ်ဘင်္ဂါလီမှ မြေပေါ်ခြေမချစေရဘူး။ မြေပေါ်၊မြေအောက်နည်း အားလုံး သုံးပြီး တုန့်ပြန်သွားမယ်။ တောင့်ထားကြပါ။
warr... so great like this ha... our nations yay.. read this ha... narr dat naw... see India as sample... shouldn't be so soft any more ha... be strong ha.. use your brain ha.. atha lut ko pae win pyaw nay tar naw.. blogger ko lae respect ma htar buu.. our nations yay... use your brain ha... please watch out... sate pyat phoe kg dal...
Our nations yay, you see ngwe nhin pwint thone's comment.
let the dogs bark. Don't fight with them. Important
is to watch out every time. We must bear it
in mind that the dogs will bite if you are
not strong enough. We must should not forget
their background, their nature, their culture
and their altitude.... OK? I think the blogger
also will agree with me.. right??
A few days back from the news, Bangladish hasamulti-billion doller deal with Russia for the Nuke plant construction. To all Burmese, don't under estimate it as it is just the begining. I don't think we can protect our nation from the threat of the neighbouring nuke power countries if you don't have nuke power even you don't have enough power to talk to them once they have the nuke power. Pls carefully look at the world's nuke history condsider seriously to this matter from our brain to foreseeing the future problematic stand off matters. YEH900
myo chit ye baw said...
All our myanmar peoples must be alert all the time and must protect our lovely races and people in myanmar when those peoples trying to stay and settle in Rakhine state in west myanmar illegaly and we believes our people are inagood unity to drive out all enemys .we must take care and pay attention to all our lovely races who need our protection from enemies .Becouse we love our peoples and all our lovely races in Myanmar .We all have the right to protect our country and our people .
ခြေနှစ်ချောင်း မကယ်ကောင်း ဆိုတဲ့စကား တယ်မှန်တာပဲကိုး။ သနားလို့ ခေါ်ထားမိပါတယ် သခင်လက်ကိုပြန်ကိုက်ချင်နေတာပါလား ဝေနှင်းပွင့်သုန်ရေ။ အဲဒါကြောင့် ပြောတာ ကုလားဟာ ကုလားပါဘဲလို့။ အချိန်ကျလို့ မြင်ရရင် မစားရမနေနိုင် ကြတဲ.ဟိုအကောင်မျိုးတွေလိုလေ...။
ညီအကိုတို့ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်အားလုံးပီပီညီညွတ်ကြပါ..အရှင်သခင်ဝါဒပီပီ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး အမှန်တရားကို ကာကွယ် ကြရအောင်.. အခုကုလားတွေဟာ မိစ္စာဒိဌိ အောက်တန်းစားများသွားရာလမ်းအတိုင်းသူတို့ အချင်းချင်းလဲ သတ်လို့ သေကုန်ကြသလို အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်တို့ လို အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတဲ့ နိုင်ငံ ပေါင်းစုတပ်ကြီးကလဲ ဗုံးတွေကျဲ၊ ဒုးံကျည်တွေနဲ့ပစ်လို့ ကုလားတွေ အတုန်းရုံးနဲ့ ကုန်သလောက်နီးပါးဖြစ်နေပါပြီ.. မသေပဲကျန်တဲ့ ကုလားတွေက ငါတို့ နိုင်ငံကိုဝင်လာဖို့ ကြိုးစားနေကြတာကို မျက်စိဖွင့် နားစွင့် ကာသတိထားပြီး တားဆီးကြပါ..ညီညွတ်ကြပါ..ဗုဒ္ဒဘာသာ ဟာ သူရဲဘောဝါဒ မဟုတ်သလို ခွေးတွေလို ကိုက်နေတဲ့ ၀ါဒမဟုတ်ဘူး.. အရှင်သခင်ဝါဒပီပီ ကြိုးစားရင်ဘုရားတောင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်.. ဒါကြောင့် ဘုရားလောင်းများပီပီ အမှန်တရားအတွက် လိုအပ်ရင် ထိရောက်တဲံ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ တုန့်ပြန်ရမယ်..ညီစေ..အောင်စေ...